Kacha mma Alpha GPC ntụ (28319-77-9) ụlọ nrụpụta nrụpụta
Cofttek bụ ihe kacha mma Alpha GPC ntụ ntụ na China. Ụlọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke (ISO9001 & ISO14001), yana ikike mmepụta kwa ọnwa nke 3000kg.
Alpha GPC ntụ ntụ Smmezi
aha: Alpha GPC
ọcha 50% na-abụghị hygroscopic ntụ ntụ ； 50% & 99% ntụ ntụ ； 85% mmiri mmiri
Molekụla arọ: 257.223 g / mol
Aha aha: Alfa GPC; Choline Alfoscerate; Alfa Glycerylphosphorylcholine
Ọkara ndụ: 4-6 awa
ngwa: Alfa GPC (Choline Alfoscerate) bụ phospholipid; ntụgharị ihu na choline biosynthesis yana etiti dị na ụzọ catabolic nke phosphatidylcholine. A na-eji Alpha GPC eme ihe dị ka Nootropic.
Gịnị bụ Alfa GPC (28319-77-9)?
Alpha GPC bụ Nootropic Compound nke a maara iji melite arụmọrụ anụ ahụ ma mee ka ụbụrụ rụọ ọrụ. Alpha gpc nootropic na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime isi mmalite kachasị dị irè nke choline; nke bara uru na aru anyi, dika eji ya eme ihe ntanetransmitter nke na enyere aka na ncheta na mkpaghari nke akwara.
Alpha GPC siri ike iji ya agwọ ọrịa, mana ọ dị nro iji jiri ya dị ka mgbakwunye. A maara iji melite ikike nchekwa na ụbụrụ ike. Mgbe nke a gasịrị, a na-ele ya anya dị ka ezigbo mgbakwunye nri maka ndị na-eme egwuregwu, yana onye ọ bụla ọzọ chọrọ ịkwado ụbụrụ ha ma n'otu oge ahụ na-azụlite ahụ ike ha.
Alfa GPC (28319-77-9) uru
Ọ na - eme ka ọrụ ụbụrụ rụọ ọrụ
Alpha ụbụrụ nootropic bụ ihe amaara ama maka ịdị nkọ nke mmụọ n'ihi ike ya iru ụbụrụ, nke emere site n'ụdị choline ya. Ọtụtụ Alfa GPC na-eji elekwasị anya na uche na akwara. Nyocha alfa ụbụrụ nootropic nyochaa na ntanetị nke onye ọrụ nwere ahụmahụ gosipụtara na ọgwụ a ga-enwerịrị onye ọ bụla chọrọ ịkwalite ọrụ ụbụrụ ya.
O nwere ike ịkwalite arụ ọrụ arụ
Mmụta emere achọpụtala na mkpụrụ ọgwụ alpha gpc hormone dị irè n’ịba ụba nrụpụta anụ ahụ mgbe ọnwa isii nke mmeju. Ya mere, ndị na-anụ ahụike na ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịtụle ịtinye Alpha GPC ntụ ntụ na nri ha iji mee ka arụ ọrụ ike ha ma bulie ike isometric. Usoro Alfa gpc tupu arụ ọrụ egwuregwu egosipụtala ịrụ ọrụ anụ ahụ ruo ọkwa ọhụrụ n'etiti ọtụtụ ụmụ nwoke egwuregwu.
O nwere ike imeziwanye ọgụgụ isi
Ọmụmụ ihe na-emepe emepe na-atụ aro na ịnara 1200 mg nke ụbụrụ Alpha nootropic kwa ụbọchị pụtara na ọ ga-emeziwanye ọgụgụ isi ọgụgụ isi na ndị ọrịa Alzheimer na ọnwa 3 ruo 6 nke ọgwụgwọ. Ekwenyekwara na ịnara 1000 mg nke Alpha GPC kwa ụbọchị dị ka ogbugba na-enyere aka melite mgbaàmà nke nkwarụ vaskụla. Alpha gpc dopamine na-emekwa ka ọnọdụ ndidi, omume, na ikike ọgụgụ isi ka mma.
O nwere ike inyere ndị ọrịa strok gbakee
Ndị ọrịa na-arịa ọrịa trensient ischemic ọgụ (TIA) na ndị na-anata alfa GPC tupu ọgbaghara ụbọchị iri achọpụtala na ha nwere mgbake ọ ka mma. Nnyocha na-egosi na ndị ọrịa na-enweta ọgwụ ogwu 10 nke Alpha GPC kwa ụbọchị maka oge nke ụbọchị 1200, na-esote ọnụ Alpha GPC a na-egbu egbu ugboro atọ n'ụbọchị maka ọnwa 28, nwere ohere nke ịgbake site na ọgụgụ isi.
Alpha GPC (28319-77-9) jiri?
Alpha GPC (28319-77-9) usoro onunu ogwu
Usoro Alpha GPC dị iche na nke mmadụ na nke ọzọ, dabere ebumnuche ha iwere ya. Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, usoro ọgwụ Alpha GPC tụrụ aro maka mmadụ n’etiti mmadụ ruru 300 milligrams ruo 600 milligrams.
Agbanyeghị, maka ndị na-eme egwuregwu, usoro ọgwụgwọ ha bụ 600mgs. Nke a bụ n'ihi na ha na-achọ mgbanye homonụ nke uto, na-ebuli ogo ike ha na akwara ike.
Ndị mmadụ na-ahụ ihe mgbaàmà nke ịda mbà n'obi nwere ụdị Alpha GPC dị iche iche. A na-ekeji usoro ha ụzọ atọ dị iche iche nke 400mg ọ bụla, na-eme ngụkọta nke 1200mgs kwa ụbọchị.
Nnyocha na-egosi na nchịkwa ọnụ nke Alfa GPC bụ nke kachasị dị irè mgbe ejiri ya were ọnụọgụ nke 300miligrams ruo 600 milligrams. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya mmadụ iburu mgbakwunye ahụ maka oge mbụ ịmalite iji usoro nke 300-600 tupu ị sesụọ ọgwụ dị elu.
Maka ndị okenye, ọnụego ọgwụ Alfa GPC a tụrụ aro ka ọ na-eme kwa ụbọchị bụ 300-1200mg, ọkacha mma ewere ya n'otu ma ọ bụ abụọ. Iburu mmezi a na usoro onunu ogwu achoro di nkpa maka nchekwa gi. Na mgbakwunye, mgbakwunye ahụ na-adịkwu irè ma a na-agbaso usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Alpha GPC powder n'ihi na ire(Ebe ị ga-azụta Alfa GPC ntụ ntụ na nnukwu)
Anyị bụ ndị na - eweta ngwaahịa Alpha GPC ntụ ntụ ọkachamara ruo ọtụtụ afọ, anyị na - enye ọnụahịa maka ọnụahịa asọmpi, ngwaahịa anyị dịkwa mma kachasị elu ma na - anwale nnwale siri ike iji hụ na ọ dị mma maka oriri gburugburu ụwa.